Linus Torvalds နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - ဇန်နဝါရီ / ၂၀၁၂ | Linux မှ
Linus Torvalds နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - ဇန်နဝါရီ / ၂၀၁၂
alunado | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, အခြား
ကောင်းသောနံနက်ခင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းသို့မဟုတ်ညနေခင်းပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီလှပတဲ့ site ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရေးသားချက်ပါ (ငါမွေးနေ့မဟုတ်သေးဘူးမွေးဖွားတယ်!) ငါကဒီမှာမရှိသေးပါဆိုတဲ့အချက်ကို၏အားသာချက်ကိုယူပြီးနှင့် site ၏မိတ်ဆွေများ၏အကျိုးအတွက်, ငါတို့ကိုစည်းလုံးသောဤပြissueနာ၏အမြစ်များထဲကတစ်ခုမှစတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်ပိုပြီးတိကျစွာသင့်ရဲ့ Kernel ကိုမှ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အားနည်းချက်တွေနဲ့ပရိုဂရမ်ရေးဖို့ကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကငါကိုယ်တိုင်ပါ။ ဆွီဒင်ဘာသာစကားပြောတတ်သူဖြစ်ပြီးပြင်ပမှာအေးလွန်းလို့ပရိုဂရမ်းမင်းကိုစလုပ်ဖို့ဖင်နင်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ် (အရမ်းအေးတယ်)ကြမ်းပြင်ကိုယူ၊ အလွန်ကောင်းစွာကမ။
ပရာ့ဂ်ျ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊
ပရာ့ဂ်ျ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ။
ပရာ့ဂ်သို့မဟုတ်မပရဂတ်အင်တာဗျူးပရာ့ဂ်, 2012 (အဆုံးသတ်) အပိုင်း3၏ 3:
- Linus ပြောသည့်အလျားလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံကိုသင်ဘယ်လိုထင်သနည်း။
- အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအလျားလိုက်ပုံစံများရှိသောအခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ ဘယ်ဟာလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Linus Torvalds နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - ဇန်နဝါရီ / ၂၀၁၂
Pfff !!! ငါကတော့အရာအားလုံးဟာဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ငါဘာမှအသစ်မပြောတတ်ဘူး၊ သူတို့ဟာစီးပွားရေးပုံစံနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမှဖြစ်မယ်၊ ဒါကအိုမင်းရင့်ရော်မှုအတွက်လမ်းပေါ်ရောက်နေတယ်။ ရေခဲစိုင်၏အစွန်အဖျားနှင့်နောက်တစ်ခုသည်အနာဂတ်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်သော်လည်းခိုင်မာသောအုတ်မြစ်များပေါ်တွင်တိုးတက်သည်
Fua! အလွန်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင်အသုံးပြုသောအရာပေါ်တွင် မူတည်၍ မော်ဒယ်တစ်ခုစီသည်ကမ္ဘာကြီးကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အခမဲ့ (သို့) စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုသူများကကမ္ဘာကိုကူညီသည်။
ရလဒ်သည်မောင်းနှင်သည့်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားအတွက်ထုတ်ကုန်သည်ထိရောက်သောအတွေးအခေါ်များ (google သို့မဟုတ် HP မှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော) အတွက်စံနမူနာကောင်းဖြစ်သည်။
ငါပြောတာက Linus ဟာ google ကိုသုံးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူ့အလိုလိုအများဆုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးသူကသူ့ kernel ရဲ့ fork ပါ။ သို့သော်ဂူးဂဲလ်သည် android ကိုကာကွယ်ရန်ဝယ်ယူနေသည့်မူပိုင်ခွင့်များသည်၎င်းအား troll ဖြစ်စေရန်ကျန်ရှိနေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အက်ပဲလ်နှင့် Samsung အား၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုကိုလူကြိုက်များစေသကဲ့သို့၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲထောက်ပံ့သူဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မတရားစွာယှဉ်ပြိုင်နေသည်။ အချည်းနှီးမဟုတ်သည်မှာ Galaxy S2 သည် iPhone 4s ထက်ပိုကောင်းသည်: p
ငါမိုဘိုင်းစျေးကွက်အတွင်းဂိမ်းများနှင့်အပလီကေးရှင်းများတိုးပွားလာသောဖြည့်ဆည်းရန်ပရိုဂရမ်မာများပိုလိုအပ်သောကြောင့် Linux ဖြန့်ချိသည့်ပုံစံကိုဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများတွင်စတင်အသုံးပြုနေသည်ဟုငါဆိုသည်။
ငါထင်ပေမယ့်သူကအလျားလိုက်လို့မပြောဘူး၊ ငါထင်တယ် git ကဲ့သို့သော tools များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် developer သည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအလုပ်လုပ်သော forks များကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်ဤပုံစံသည်လေးစားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လူအများစုအား bug များကိုဖြေရှင်းရန် (သို့) နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနိုင်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီသည်။
ငါ torvalds အင်တာဗျူးကိုကြိုက်တယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော့်အတွက်တော့နည်းနည်းလေးပဲ။ :)
စဉ်းစားတွေးခေါ်ရေးသားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါလည်းသေချာဖတ်ပြီးအဲဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှထပ်ထည့်စရာမေးခွန်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပါ။ ငါတို့စာဖတ်နေတယ်။
Debian KDE မှ Gtk application များ၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ
Nautilus မှသတင်းအချက်အလက်များကို Turbo-Secure ဖြင့်စာဝှက်ပါ